Ndingazilungisa Njani Iimpazamo Zam? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKikaonde IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyungwe IsiNzema IsiOssetia IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTwi IsiUkrainian IsiUrhobo IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Yintoni obuya kuyenza wena?
Izizathu ezithathu ezibangela uvume iimpazamo zakho
Unokufunda okuthile kwiimpazamo zakho
Funda ngoko kwenzeka kuKarina, kuze kube ngathi oku kwenzeka kuwe. Ubunokwenza ntoni ukuba ubukwimeko efana neyakhe?
UKarina uthi: “Ngeny’ imini ndandibalekis’ imoto ndisiya esikolweni, ndamiswa lipolisa laza landibhala itikiti. Ndandikhathazekile! Ndaxelela uMama, wathi mandichazele uTata kodwa ndandingafuni ukuyenza ke leyo.”
Indlela Yokuqala: Uthula uthi cwaka, ngethemba lokuba uTatakho akasoze ayazi.
Indlela Yesibini: Uxelela uTatakho yonke into eyenzekileyo.
Unokufuna ngamandla ukukhetha Indlela Yokuqala. Umamakho unokucinga ukuba uthethile notata wakho wamchazela yonke into. Zikho izizathu ezibangela ukuba kufuneke uthethe ngeempazamo ozenzayo—enoba zibandakanya itikiti lamapolisa okanye akunjalo.
1. Yinto efanelekileyo omele uyenze. Xa ithetha ngendlela amaKristu amele azenze ngayo izinto, iBhayibhile ithi: “Sinqwenela ukuziphatha ngokunyaniseka kwizinto zonke.”—Hebhere 13:18.
“Ndizama ukunyaniseka nokuba ngumntu onokuthenjwa—ndizivuma ngoko nangoko iimpazamo endizenzayo.”—UAlexis.
2. Abantu badla ngokukuxolela xa uzivuma iimpazamo zakho. IBhayibhile ithi: “Okugubungelayo ukunxaxha kwakhe akayi kuphumelela, kodwa okuvumayo aze akushiye uya kwenzelwa inceba.”—IMizekeliso 28:13.
“Akululanga ukuvuma iimpazamo, kodwa uye uthenjwe ngabantu xa usenjenjalo. Uye ubonakale ukuba unyanisekile. Imeko iyatshintsha ibe ngcono xa uvuma impazamo oyenzileyo.”—URichard.
3. Okona kubalulekileyo kukuba, ukuvuma iimpazamo kuvuyisa uYehova uThixo. IBhayibhile ithi: “Umntu otenxayo uyinto ecekisekayo kuYehova, kodwa ukusondelelana naye kokwabo bathe tye.”—IMizekeliso 3:32.
“Emva kokuba ndenze impazamo enkulu, ndaqonda ukuba kufuneka ndiyichaze. UYehova wayengasoze andisikelele xa izinto ndingazenzi ngendlela yakhe.”—URachel.
UKarina wayilungisa njani impazamo yakhe? Akazange amchazele utata wakhe ngetikiti awayelifumene. Kodwa wayengazukukwazi ukuyifihla oko loo nto. UKarina uthi: “Emva kwexesha elingangonyaka, xa utata wayejonge iphepha leinshorensi, waqaphela itikiti elibhalwe ngegama lam. Ndaba sengxakini enkulu, nomama waba nomsindo kuba ndingazange ndimxelele utata!”
Isifundo: UKarina uthi: “Ukufihla iimpazamo akuzilungisi izinto. Uye uphendule ngazo ngenye imini.”
Wonke umntu uyazenza iimpazamo. (Roma 3:23; 1 Yohane 1:8) Ukuzivuma kwangoko kubonisa ukuba siqolile.
Inqanaba elilandelayo lelokuba ufunde kwiimpazamo zakho. Ngelishwa ulutsha oluninzi alufundi kwiimpazamo zalo! Lunokucinga ngendlela uPriscilla awayecinga ngayo xa wathi: “Ndandiphoxeka kakhulu xa ndisenza iimpazamo. Ndandingazithembanga ngoko iimpazamo zam zaba ngathi ngumthwalo onzima emagxeni am. Ndandisithi akho yam.”
Ngaba nawe ukhe uvakalelwe ngale ndlela? Ukuba kunjalo, khumbula ukuba ukuhlala ucinga ngeempazamo ezenzekayo kufana nokungayijongi indlela ngoxa uqhub’ imoto. Ukuhlala ucinga ngezinto ezenzekayo kuya kukushiya uziva kungekho yakho, ungabi nawo namandla okujongana nekamva.
Kutheni ungakhe uzijonge kakuhle izinto?
“Cingisisa ngeempazamo owakha wazenza, funda kuzo ukuze ungaphindi uzenze. Suhlala ucinga ngazo zide zikudimaze.”—UElliot.
“Kwiimpazamo endakha ndazenza ndiye ndizame ukukhangela into endinokuyifunda kuzo, oko kundinceda ndikwazi ukwenza izinto ngendlela eyahlukileyo kwixesha elizayo. Loo nto indinceda ndikhule.”—UVera.
OKO KUTHETHWA NGOONTANGA BAKHO
“Abanye abantu ziyabakhathaza iimpazamo zabo, ngoxa abanye bengenaxesha lazo. Eyona nto besifanele ukuba siyayenza kukuba sifunde kuzo size singaziphindi.”—UConnor.
“Xa iimbaleki zisiwa, iintloni zizibeka ecaleni, ziphakame ziphinde zithathise. Kufuneka wenze loo nto kanye xa wenze impazamo. Xa ufunda kwiimpazamo ozenzayo, uye ube ngumntu ongcono.”—UDami.
“Xa ucinga ngeempazamo owakha wazenza, kwenze oko kuba ufuna ukufunda kuzo. Kuphephe ukuphinda uzenze. Musa ukuhlala ucinga ngazo. Funda isifundo wandule ke uqhubeke nobomi.”—UZipporah.